လေထန်ကျောင်းက ကွမ်းဆရာ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လေထန်ကျောင်းက ကွမ်းဆရာ (၁)
လေထန်ကျောင်းက ကွမ်းဆရာ (၁)
Posted by တောတွင်းပျော် on Feb 20, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 21 comments
တိုက်ခဲ့ ဖူးတဲ့ ခလုတ်လေးတစ်ခု
ခေါ်သံနဲ့ အတူ ခြေထောက်ကနေ လှုပ်နှိုးခံရလိုက်ရတာမို့စောင်ခြုံကွေးအိပ်ပျော်နေတဲ့ ကျနော် လန့် နိုးထ
လာတယ်။ ချမ်းချမ်းစီးစီး ဆောင်းတွင်းမနက် အိပ်လို့ ကောင်း၊ ကွေးလို့ ကောင်းတုန်း!
ကျနော်မျက်လုံးဖွင့် ကြည့် လိုက်တော့ကျနော့ ခြေရင်းမှာ မောင်တင်ဋ္ဌေး…
ဟား တင်ဋ္ဌေး၊ စောစောစီးစီး ဘာကိစ္စရှိလို့ လဲဟ! ကျနော်မေးလိုက်တော့ 
ဟား! အကိုကလည်း အကို ဒီနေ့ ကျောင်းတက်ရမှာလေ… ဟေ! ငါကဘယ်ကျောင်းတက်ရမှာလဲဟ?
အကိုတော့ လုပ်ပြီ၊ သီတာရွာကလူကြီးတွေပြောတော့အကိုဒီနေ့အလုပ်ဝင်ရမှာဆို……
ဟား! ပြန်သတိရပြီ… ဟုတ်သားပဲ။
ပြီးခဲ့ တဲ့ နှစ်ပတ်ကျော်လောက်က တောတွင်းပျော့် အိမ်ကို လူကြီး ၃ယောက် ရောက်လာပြီး သူတို့ ရွာမှာ
ကျောင်းဆရာလုပ်ပေးဖို့လာပြောတာ။ အမှန်တကယ်က ကျနော်ကျောင်းဆရာ မလုပ်ချင်။ ဒီအချိန်မှာ တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် ထိုင်းနယ်စပ်ဖက် နွားမောင်း ကျွဲမောင်းလိုက်နေတာ။ လဝက် တစ်ခေါက်လောက်
ရတဲ့ ခေါက်ကြေးက ကျောင်းဆရာတစ်လရတဲ့လစာထက် ၂ဆ ၃ဆပိုသာရတယ်။ ကျနော် ကျောင်းဆရာ
ဒီတော့လူကြီးတွေကပြောလာတယ်။ သူတို့ ရွာက အခုလက်ရှိ ဆရာမလေး ရှေ့ လ ဇန္နဝါရီမှာ ဝမ်းဆွဲတက်မှာ။ ကလေးတွေရဲ့စာမေးပွဲကြီးကလည်းနီး ကျောင်းပိတ်ချိန်ကလည်း မဝေးလှတော့ တာမို့ 
ဆရာစားရှာရခက်နေတယ်။ လစာ အဓိကမထားပဲ ကူညီပါ တောင်းတောင်းပန်ပန်ဆိုလာတော့မမြင်ဖူးသေးတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ မျက်နှာမြင်ယောင်လာပြီး နောက် မဝေးလှတော့ တဲ့ အတန်းတင်
စာမေးပွဲကြီးကိုလည်းမြင်ယောင်မိလာတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် အဲဒီကျောင်းလေးတွေဖြစ်သွားသလား။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကျနော်ဆက်ငြင်းနေမယ်ဆိုရင် ကျနော်လူမိုက်ဖြစ်သွားလိမ့် မယ်။ ဒီတသက်လည်း
လိပ်ပြာလုံနိုင်တော့ မှာမဟုတ်။ တွဲဖက်ကျောင်းလေးရဲ့ ဆရာမလေးကို ဒေါသထွက်မိပေမယ့်သူ လည်း
သူ့ ဘဝရှေ့ ရေးလမ်းကြောင်းမို့ အပြစ်မတင်ချင်။
ခေါင်းရင်းက MADE IN CHINA စားပွဲတင်နာရီကိုကြည့် တော့၇ နာရီကျော်စပြုနေပြီ။ ကမန်းကတန်း
မျက်နှာသစ်၊ အမေက မနက်စာ စားသွားအုံး ဆိုတာတောင် မစားတော့ ဘဲ အိမ်ရှေ့ ကိုထွက်လာခဲ့ တယ်။
ဟိုရွာမှာတော့ကျောင်းဆရာအသစ်အတွက် ထမင်းပွဲတစ်ခုတော့ရှိနေမှာပါလေ။
“ အကို၊ ဘယ်လမ်းက သွားမလည်း” မောင်တင်ဋ္ဌေး ကျနော့ ကိုမေးလာတော့ကျနော စဉ်းစားလိုက်တယ်။
မြောက်ဖက်လမ်းက လမ်းကောင်းပေမယ့်ခရီးဝေးတယ်။ တောင်ဖက်လမ်းက ဖြတ်လမ်း၊ ဒီဖြတ်လမ်းကိုတောင် ခပ်ပြင်းပြင်းခြေလျင်သုတ်ရင်တောင်မှ စာသင်မယ့် ရွာကို ၂နာရီလောက်ကြာမယ်။
တောင်ဖက်လမ်းကို ကျနော်ရွေးလိုက်တယ်။ နောက်တစ်ကြောင်းက တောင်ဖက်လမ်းကလိုက်ရင် မိုင်ဝက်လောက် အကွာမှာ ဆယ်အိမ်စုရွာကလေးရှိတယ်။ အဲဒီရွာမှာ……….
ရွာကနေ ခပ်သုတ်သုတ်ထွက်လာရင်း တင်ဋ္ဌေးကို ဟိုရွာကျောင်းရဲ့ အခြေအနေကိုမေးကြည့် တယ်။
တင်ဋ္ဌေးက ၈တန်းအောင်ပြီး အဲဒီရွာမှာ ရွာခန့် ကျောင်းဆရာလုပ်တာ ၂နှစ်ရှိနေပြီ။ စကားတပြောပြောနဲ့ 
လာခဲ့ တာ ဆယ်အိမ်စုရွာကလေးထဲကို ဝင်လာပြီ။ ရွာထဲ ဖြတ်လျှောက်ရင်း အိမ်ကြီးတစ်အိမ်ရှေ့ အရောက်
ခြံဝင်းထဲကိုလှမ်းကြည့် လိုက်တော့ ….တွေ့ ပါပြီ။ ကျနော့ ရဲ့ သူကလေး…….
သူလည်းကျောင်းဆရာမပါပဲ။ ရေတွင်းဘေးမှာ ကျောပေးထိုင်ရင်း ထမိန်ရင်လျားနဲ့ပခုံးဝင်းဝင်းလေးကို
တွေ့ လိုက်ရတယ်။ သူကလေး ရေချိုးနေတာပဲ။ ဆောင်းတွင်းမနက် ချမ်းချမ်းစိမ့် စိမ့် မှာ သူမို့ လို့အားပါးတရ ရေချိုးနေတာ… အာ့ မလေးလေး! သူ့ အစား ကျနော့ မှာ ချမ်းလိုက်ရတာ… ဆက်မကြည့် ရဲတော့ ။
ဒိရွာလေးကထွက်တော့သစ်ပင်ချုံပုတ်တွေနဲ့တောလမ်းကျဉ်းထဲရောက်သွားတယ်။ မနက်ခင်း နှင်းရည်စွတ်နေတဲ့ လမ်း လျှောက်ရတော့စီးလာတဲ့မြင်းကြယ်ဖိနပ်က မကြာခဏချော်၊ သဲကြိုးပြုတ်လိုက်
ပြန်တပ်လိုက် လမ်းလျှောက်ရတာ အဆင်မပြေ။ နောက်တော့ ဖိနပ်ကိုချွတ် လက်နဲ့ ကိုင်၊ ပုဆိုးစလွယ်သိုင်း
လွတ်လွတ်လပ်လပ်လျှောက်လိုက်တယ်။ ငါဟာကျောင်းဆရာ။ တင်ဋ္ဌေးကိုလည်း ကြည့် လိုက်တော့သူလည်း ကျနော့ လို ဖိနပ် လက်ကကိုင် ပုဆိုးကို လည်ပင်းချိတ်၊ အင်း… သူလည်းကျောင်းဆရာ။
ဒီလိုနဲ့ ခပ်သုတ်သုတ်လျှောက်လာရင်း ရိုးပြတ်လယ်ကွင်းပြင်တွေကို ဖြတ်လိုက်၊ တောအုပ်လေးတွေနဲ့တောင်ကုန်းတွေကို ကျော်ဖြတ်လိုက် နောက်ဆုံးတော့တဖက်တချက် သစ်ပင်ကြီးတွေ စီတန်းပေါက်နေတဲ့စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုကို သစ်လုံးတံတားပေါ်ကနေဖြတ်ကူးလိုက်တာနဲ့လယ်ကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခု ဘွားကနဲ ပေါ်လာတယ်။ လယ်ကွင်းပြင်ရဲ့ ဟိုဖက်တစ်ဆုံးမှာ.. ခန့် ခန့် ငြားငြားအိမ်ကြီးတစ်ခု။ ဒါ ကျနော်စာသင်ရမယ့်သီတာရွာက ဘုန်းကြီးကျောင်းပဲ။ ။
နောက်ဆုံးလယ်ကွင်းကိုဖြတ်နေရင်း တင်ဋ္ဌေးကိုမေးလိုက်တယ်။ ငါတို့ ဘယ်မှာ ထမင်းစားမှာလဲလို့ ။
ဗိုက်ကဆာစပြုနေပြီ။ တင်ဋ္ဌေးက ခပ်ပြုံးပြုံး ‘ ဘုန်းကျောင်းရှိတယ်’’။
တောတွင်းပျော်လည်း ဘုန်းကျောင်းထွက်ပေပဲ။ ပုစ္ဆာတစ်ခု အဖြေအတွက် တင်ဋ္ဌေးကို ဆက်မေးလိုက်တယ်။
ဘုန်းကျောင်းသား ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ? ။ “ ၆ ယောက်” တင်ဋ္ဌေးက ခပ်တိတိဖြေလိုက်တယ်။ ကျနော့ 
စိတ်ထဲမယ်တော့သွားပါပြီကွာလို့ သာ……
ဘုန်းကျောင်းပေါ်တက်ပြီး ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကို သွားနှုတ်ဆက် ဦးချလိုက်တယ်။ ဆရာတော်လို့ဆိုရပေမင့်သက်တော် ၃၀ ကျော်လောက်သာရှိသေးတယ်။ မီးဖိုဖက်ဆင်းပြီး ထမင်းစားပွဲပေါ်က အုပ်ဆောင်း
ဖွင့် ကြည့် လိုက်တော့ထင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ထမင်းဖြူနဲ့ငပိဖျော်ရည် တို့ စရာတစ်ချို့ ။ တခြား ဘာဟင်းမှမကျန်။ကျောင်းဆရာအသစ်အတွက် ဘုန်းကျောင်းသားတွေ စပါယ်ရှယ် ချန်ထားခဲ့ ပုံပဲ။
မထူးပါဘူး။ ဆာဆာနဲ့ရှိတာလေးပဲ လွေးတော့ မယ်။ ထမင်းစားပြီးတာနဲ့ဘုန်းကျောင်းပေါ်ကဆင်း
ကျောင်းအနောက်ဖက် မလွယ်ပေါက်ကနေထွက်ပြီး နည်းနည်းလျှောက်လိုက်တာနဲ့တောင်စောင်းပြေပြေမှာ
ဆောက်ထားတဲ့အလျား ပေ ၆၀၊ အနံ ပေ ၃၀ လောက်ရှိတဲ့ကျနော်စာသင်ရမယ့် ကျောင်းကလေးကို
တွေ့ လိုက်ရတယ်။ ကျောင်းရဲ့ မြောက်ဖက် တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ထုံးဖြူဖြူစေတီလေးတစ်ဆူနဲ့သိမ်တစ်ဆောင်၊ ကျောင်းရဲ့အောက်ဖက်ခြေရင်းမှာ အိမ်ခြေစု နည်းနည်း၊ ဒီအိမ်ခြေစုရဲ့ တဖက်မှာ စောစောက ကျနော်တို့နောက်ဆုံးဖြတ်လျှောက်လာခဲ့ တဲ့လယ်ကွင်းပြင်ဆီ ပြန်ရောက်တယ်။
ကျောင်းတံခါးဝကိုရောက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် အထဲကဆူညံနေတဲ့ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတွေရဲ့ အသံတွေ
တိတ်ကုန်တယ်။ ကျနော်လည်း ပထမဦးဆုံး ကျောင်းဆရာဘဝနဲ့စာသင်ခန်းဝင်ရမယ့်ခြေလှမ်းတွေက
တုန်ချင်သလိုလို။ ရင်ထဲမှာလည်း လှုပ်ရှားနေတယ်။ အခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားလေးတွေ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ညီညီညာညာနဲ့“ မင်္ဂလာပါဆရာ” လို့ဦးကြို
နှုတ်ဆက်ခံလိုက်ရတော့ပြုံးချင်ချင်ဖြစ်မိသေးတယ်။ ကိုယ့် ကိုကိုယ် ဘယ်တုန်းကမှ ကျောင်းဆရာ
ဖြစ်လာလိမ့် မယ်လို့ တွေးမထားခဲ့ မိလို့ ပဲ။ သူတို့ တွေက နှုတ်ဆက်ပြီး ဆက်ပြီးမတ်တပ်ရပ်နေကြလေရဲ့ ။
ကျနော် ဘာပြောရမှန်းမသိအောင် စိတ်လှုပ်ရှားနေတုန်း။ နောက်မှ ဆရာလေးတင်ဋ္ဌေးက ကျောင်းသားလေးတွေကို ထိုင်ကြ၊ ထိုင်ကြ လို့ ပြောသံကြားမိမှ အော်.. တကယ်ဆို ဒီစကား ငါကပြောရ
မှာပါလားလို့သတိပြန်ဝင်လာတယ်။
ဆရာထိုင်စားပွဲမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး ဘယ်ကဘယ်လိုစလုပ်ရမှန်းမသိ။ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသား အားလုံးရဲ့ 
စူးစမ်းတဲ့ အကြည့် တွေကကျောင်းဆရာအသစ်ပေါ်မှာ။ ကျနော်သေချာပေါက်ထင်သည်။ သူတို့ လေးတွေရဲ့ 
စိတ်ထဲမှာ ဒီဆရာအသစ်က အရိုက်ကြမ်းသလား၊ ကြင်နာတတ်သလား။ ကျနော်တို့ တွေ ကျောင်းသားဘဝ
တုန်းကလည်း ဆရာသစ်နဲ့ ကြုံတိုင်း ဒီလိုတွေးခဲ့ ကြတာပါပဲ။
ကျောင်းအခန်းတွင်း အခြေအနေကို လေ့ လာကြည့် လိုက်တယ်။ ဝင်ပေါက် တံခါးပေါက်ကတစ်ခု၊ အဲဒီ တံခါးဝနားမှာက သူငယ်တန်း၊ အဲဒီကစပြီး အတန်းလိုက် ကျနော်ထိုင်တဲ့ဆရာထိုင်စားပွဲရှေ့စတုတ္ထတန်း
အထိ အစဉ်လိုက်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ နောက်မှာ ပြူတင်းပေါက် ၂ခု၊ အဲဒီပြူတင်းပေါက်ဘေးမှာက အပြင်ဖက် စင်ထုတ်ထားတဲ့ သောက်ရေအိုးစင်။ ကျနော်ထိုင်တဲ့ စားပွဲဘေးမှာက ပြူတင်းပေါက်တစ်ခု၊
စားပွဲပေါ်မှာက သောက်ရေအိုးတစ်လုံး နဲ့ဒီကျောင်းနဲ့ ပတ်သက်သမျှ စာရွက်စာတမ်း မှတ်တမ်းတွေ။
ကျောင်းသားတွေရှေ့ က Blackboard သင်ပုန်းကြီးက ၄ ခု၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့စားရေးခုံပုလေးတွေ ရေကြည့် တော့အတန်း ၄တန်း၊ သူငယ်တန်းကစပြီး စတုတ္ထတန်းအထိ ရေကြည့် ရင် အတန်း ၅တန်း ရှိနေရမှာ။ ခု ၁တန်းပျောက်နေတယ်။ တင်ဋ္ဌေးကိုမေးကြည့် တော့ပထမတန်းနဲ့ဒုတိယတန်းက အရှေ့အနောက် ခွဲပြီး ရောထိုင်နေတာတဲ့ ။ အခန်းအခြေအနေမရပေါ့ လေ။
စာသင်ကျောင်းက ဖက်မိုးဖက်ကာ အခင်းပျဉ်။ ကျောင်းသားတစ်အုပ်လုံးက တစ်ဆောင်တည်းမှာ။
စာသင်ခန်း အခြေအနေကိုလေ့ လာပြီး စာသင်ကြားရေး အတန်းလိုက်ခွဲဝေရေးအတွက် တင်ဋ္ဌေးနဲ့ ညှိမယ်
ခေါ်တော့တင်ဋ္ဌေးက ခဏ ကိုကြီးဆိုပြီး ကျောင်းသားတွေဖက်လှည့်အခုရောက်လာတဲ့ သူက ငါတို့ကျောင်းရဲ့ ဆရာအသစ် နင်တို့ သိကြသလားဆိုတော့ကျောင်းသားလေးတွေက ညီညီညာညာပါပဲ
ဟင်! ဒါ ကျောင်းဆရာအသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးနေတာပါလား။ မိတ်ဆက်ပေးပုံကလည်း သိပါလား၊
သိပါတယ်။ ထားပါတော့ … တင်ဋ္ဌေးက အခုမှ လူပျိုပေါက်သာသာပဲ ရှိသေးတာ။ စကား ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်
ဘယ်ပြောတတ်ပါ့ မလဲ။ အဓိကတော့သိဖို့ ပါပဲ။ တင်ဋ္ဌေးက အေး၊ နင်တို့ သိရင်ဆိုပြီး ကရင်လိုဆက်ပြောတယ်။ ကျနော်နားမလည်လိုက်။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ ရယ်ကျဲကျဲ ဖြစ်ကုန်တယ်။
ကျနော်တင်ဋ္ဌေးကိုကြည့် တော့ ပြုံးဖြီးဖြီး၊ ဘာပြောလိုက်တာလည်း တင်ဋ္ဌေးဆိုတော့“ ဒီဆရာက ကွမ်းအရမ်းကြိုက်တယ်” တဲ့ ။
စားပွဲပေါ်က ကျောင်းခေါ်ချိန်ဇယားဖွင့် ပြီး နာမည်ခေါ်လိုက်တော့ပျက်ကွက်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိ။
နာမည်ခေါ်ပြီးတာနဲ့တင်ဋ္ဌေး ကျနော့ ကိုပြောလာတယ်။ သူက သူငယ်တန်း၊ ပထမတန်းနဲ့ဒုတိယတန်းက
ဘာသာရပ်တစ်ချို့ သင်မယ်။ ကျနော်က ကျန်တဲ့ အတန်းတွေကိုတာဝန်ယူတဲ့ ။ အရင်ဆရာမလေးတုန်းကလည်း ဒီလိုသင်ခဲ့ တာတဲ့ ။ နောက်ပြီး ကျနော် သင်မယ့်ကျောင်းသားလေးတွေက
ဗမာလို ကောင်းကောင်းပြောတတ်ကြတယ်။ မြို့ နဲ့ အလှမ်းဝေး ဒီလိုတောခေါင်ခေါင် အရပ်က ကရင်လေးတွေ
ဗမာလိုကောင်းကောင်းပြောတတ်ကြတာ အံ့သြစရာပဲ။ နေထက်လင်းတို့ ၊ သီဟတင်စိုးတို့ ရဲ့ဗွီဒီယိုဇာတ်လမ်း
တွေရဲ့ကျေးဇူးလည်းပါမယ်ထင်ရဲ့ ။
ဒီတစ်မနက်တော့ကျနော် စာသင်မယ့်အစီအစဉ်မရှိ။ အခုမှ အသစ်စက်စက်ရောက်လာပြီး အခုချက်ချင်း
စာသင်ဆိုရင် စက်ရုပ်ဆန်နေလိမ့် မယ်။ ကျောင်းသားတွေနဲ့ အရင် ရင်းနှီးမှုကိုလုပ်ရမယ်။ တော်ကြာ ဆရာအသစ်ကိုရှိန်ပြီး မပြောရဲမဆိုရဲ ဖြစ်မှာကိုလည်း မလိုလားဘူး။
ခုနက နာမည်စာရင်းခေါ်ပြီးပေးမယ့်ခု တစ်ယောက်ခြင်းစီ နာမည်ပြန်ခေါ်မေးတယ်။ စတုတ္ထတန်း အရှေ့ တန်းက ကျောင်းသူလေးတွေ… နော်မြင့် မြင့် ရီ၊ နော်ချဖေ၊ နော်ကလျာ၊ နော်နှင်းနှင်းအေး၊ နော်ပြုံးပြုံးအေး၊
နော်ခင်အေး။ နာမည်တွေမှာက အေး ဆိုတဲ့စကားလုံး ပါတာများတာကို သတိထားမိတယ်။ နောက် ထူးထူးဆန်းဆန်း နာမည် နော်စီမံကိန်း တဲ့ ။ (သူလည်းနောက်တော့နော် မြင့် မြင့် အေး ဆိုပြီး ပြောင်းသွားတယ်)။ အနောက်တန်းက စောစံလှ (သူ့ ကိုနာမည်ပြောင် ကိုချစ်စရာလို့ ခေါ်ကြတယ်။
သူ့ ပုံစံက လူရွှင်တော် ကိုချစ်စရာနဲ့တူသလို ဟာသဉာဏ်ရွှင်သူလည်းဖြစ်တယ်)။
စောတာအဲ့ ( ဗမာလိုပြန်တော့စောချစ်သူ၊ သူက ထူးထူးခြားခြား မိန်းကလေးတစ်ယောက်လိုချောပြီး
ခပ်တည်တည် နေတတ်သူ)၊ မောင်ထူးဟန်၊ အရပ်ခပ်ုပု ဗိုက်ပူပူနဲ့အဝတ်အစားကို သပ်သပ်ယပ်ယပ်
ဝတ်တတ်သူ။ နောက်တစ်ယောက်က စောအေးမင်း( စောအေးမင်းနဲ့နော်မြင့် မြင့် ရီက မောင်နှမ။
စတုတ္ထတန်းကျောင်းသားဆိုမင့်အပျိုပေါက်၊လူပျိုပေါက် ဖြစ်နေပြီ။ ဆရာတင်ဋ္ဌေးနဲ့ က အသက်
(ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသား နာမည်တွေက ကျနော်ဒီပိုစ်ရေးရင်းက မှတ်မိသရွေ့ ပါ။ တစ်ချို့ မမှတ်မိတော့ 
တာတွေ ကျန်ခဲ့ ပါသေးတယ်)
စောအေးမင်းကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေက ဘုန်းကျောင်းသားတွေ……
နာမည်တွေမေး၊ရွာနာမည်တွေမေးပြီး ကိုယ့် ကိုကိုယ် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။ ငါက အစချီပြီး….
ကိုယ့် ကိုကိုယ် ဆရာလို့ သုံးနှုန်းရမှာ မဝံ့မရဲ၊ နောင်လည်း ဘယ်တော့ မှ မသုံးပါ။ ငါဆိုတဲ့နာမ်စားနဲ့စခန်းသွားနေခဲ့ တယ်။ ဒီလိုနဲ့ရင်းနှီးတစ်ချို့ ရှိလာပြီး သူတို့ ဖက်က ပြောရဲဆိုရဲ ရှိလာကြတယ်။
တကယ်တန်းတော့သူတို့ က ကျနော်ထင်ထားတာထက်တောင် ပိုပြီး ပွင့် ပွင့် လင်းလင်း ပြောရဲဆိုရဲ
ကြတယ်။ ကျောင်းသူလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေထက် ပိုပြောရဲကြတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေက ခပ်တည်တည်လေး။ စောစံလှ တစ်ယောက်သာ စကားများများပြောပြီး ပြောင်စပ်စပ်။ စာမေး၊စာဖြေတာတောင်
ပြောင်စပ်စပ်ချင်။ ကျနော်ကတော့ စိတ်မဆိုးတဲ့ အပြင် ပိုတောင် သဘောကျသေး။ ကျနော်က အခု တပည့် 
တွေရဲ့ ဆရာဖြစ်နေလို့ခပ်တည်တည်နေရပေမယ့်အပြင်မှာတော့စောစံလှလို။
သူတို့ တွေ အဝေးကတွေ့ ရင်တောင် ဝေး…ဆရာ အော်ပြီးနှုတ်ဆက်တတ်ကြတာ။ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်ကဆို
အပြင်မှာ ဆရာနဲ့ မျက်နှာချင်း မဆိုင်ရဲ။ ဝေးဝေးက ရှောင်နိုင်သရွေ့ ရှောင်ခဲ့ ကြတာ။
သူတို့ တွေနဲ့ပြောရင်းဆိုရင်း စားပွဲပေါ်က ကျောင်းမှတ်တမ်းတွေ လျှောက်လှန်ကြည့် တော့ဝဲသီလာ၊ သီတာ၊
တောကျောင်း ဆိုတဲ့ ကဗျာဆန်ဆန် ရွာနာမည် ၃ခုတွေ့ ရတယ်။ တကယ်တော့ကျနော် စာသင်နေတဲ့ကျောင်းက အိမ်ခြေစုစု နည်းနည်းသာရှိတဲ့ရွာ ၃ရွာ ပေါင်းပြီး တွဲဖက်မူလတန်းကျောင်းလေး ဖွင့် ထားတာ။ မူရင်း ကရင်လိုခေါ်တဲ့ ရွာ နာမည်တွေကို ကျနော့ အရင်ပြောင်းသွားတဲ့ဆရာမလေးက ဗမာလိုခေါ်လို့အဆင်ပြေအောင် ကျောင်းမှတ်တမ်းထဲပြောင်းထည့် ထားခဲ့ တာ။ ဝဲသီလာရွာ၊ သီတာရွာ နဲ့တောကျောင်းရွာ
အနေအထားက ဒေါင့် ကျယ်တြိဂံလိုမျိုး၊ ဖိုခနောက်ဆိုင်ကျတယ်။ အခုကျောင်းရှိတဲ့သီတာရွာက အလယ်ဗဟိုလိုနေရာမျိုးမှာ။ ဒီရွာကနေ တောကျောင်းရွာက အရှေ့ တောင်ဖက် တစ်မိုင်နီးပါးလောက်မှာ။
ဝဲသီလာရွာက အရှေ့ မြောက် ၃မိုင်လောက်အဝေးမှာ။ သီတာရွာနဲ့ တောကျောင်း ၂ရွာပေါင်းပြီး သီတာရွာ
ဘုန်းကျောင်းတစ်ခု၊ ဝဲသီလာက သူ့ ကျောင်းနဲ့ သူ။
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ အနေအထားကို လေ့ လာကြည့် တော့စည်းရှိကမ်းရှိနေတတ်ကြတာတွေ့ ရတယ်။ အရင် ဆရာမလေးက စေတနာပါပါ စေ့ စေ့ စပ်စပ် သင်ကြား အုပ်ချုပ်ခဲ့ ပုံပဲ။ အဲဒီဆရာမလေးက ဒီကျောင်းစဖွင့် ကတည်းက ကိုင်ခဲ့ တာ။ ကရင်ဆရာမဆိုပေမယ့်ကျောင်းသားတွေကို ဗမာစကားနဲ့ရင်းနှီး
နေအောင်လုပ်ပေးထားခဲ့ တယ်။ ကျောင်းသားတွေကိုမေးကြည့် တော့ဆရာမက ကျောင်းမှာ ဗမာလိုပြောပြီး
အပြင်မှာ ကရင်လို ပြောတာတဲ့ ။ ဒီဆရာမလေး ကျေးဇူးကြောင့်ကရင်စကားမတတ်တဲ့တောတွင်းပျော်
ကျောင်းမှာ အသင်း ၄သင်းခွဲထားပေမယ့်သန့် ရှင်းရေးကို အတန်းကြီးကျောင်းသူတွေကလုပ်၊ သောက်ရေအိုး
ဖြည့် တာကိုတော့အတန်းကြီးကျောင်းသားတွေက အသင်းမခွဲဘဲ အားလုံးက သူတို့ ဘာသာ အသိစိတ်နဲ့ 
တာဝန်ယူလုပ်ကြတယ်။ သူတို့ ကသာ အသင်းမခွဲပေမယ့်တောတွင်းပျော်က ပြန်ပြီး အသင်းပြန်ခွဲလိုက်တယ်။
“ ဟေ့ !ဒီအပတ် ဘယ်အသင်းတာဝန်လဲ?” မေးလိုက်တော့ 
ချက်ချင်းပဲ စောစံလှတစ်ယောက် ညာဖက်လက်မြောက်မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကျနော်တို့ အသင်းပါ ဆရာတဲ့ ။
“ဟ.. မင်းတို့ အသင်းလား ဆရာကြီးစံလှ၊ ဝမ်းသာတယ်ကွာ” ပြောလိုက်တော့ကျောင်းသားတွေရယ်ကြတယ်။ စောစံလှကတော့ကျနော်ဘာဆက်ပြောမလဲဆိုပြီး စောင့် နေတယ်။
စောစံလှ မင်းတို့ အသင်းကို တာဝန်တစ်ခုပေးချင်လို့လုပ်ပေးနိုင်မလား မေးတော့စောစံလှက ကျနော့ ကို
ဆလံပေးတဲ့ပုံစံလုပ်ပြပြီး “ Yes! Sir” လို့ ပြန်ဖြေတော့ကျောင်းသားတွေ ရယ်ကြတယ်။
တကယ်တန်း တာဝန်ပေးမယ်ကျတော့ပေးသင့် သလား တွေဝေမိတယ်။ ဒါပေမယ့်ခံတွင်းကချဉ်နေပြီး။
စံလှ၊ ငါကွမ်းစားချင်တယ်။ ရွာထဲသွားပြီး ကွမ်းသီး၊ကွမ်းရွက်၊ထုံး၊ဆေး ရှာပေးနိုင်မလား။
“ဟုတ်ကဲ့ .. ဆရာ ရွာထဲမှာရှိပါတယ်” ဒီတစ်ခါတော့စောစံလှ တည်တည်လေးပြန်ဖြေတယ်။ သူ့ ကို တာဝန်ကြီးကြီးပေးခံရမယ်ထင်ထားသလား မသိ။ ကွမ်းရှာတာဝန်ဆိုတော့ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်ချင်ပုံ။
ကျောင်းသားတွေကလည်း ဆရာအသစ်ကို အထူးအဆန်းတစ်ယောက်လို ကြည့် နေကြတယ်။
စောစံလှ ရွာထဲဆင်းမယ်အထွက် ဆရာတင်ဋ္ဌေးက (ကသိပါလာ) ဆေးရွက်ကြီးများများယူလာခဲ့ ဖို့ထပ်မှာလိုက်တော့ကျောင်းသားတွေ မျက်လုံးပြူးကုန်တယ်။ လတ်စတတ်တော့ကိုယ့် ဆရာကလည်း
ဒီလိုနဲ့ကျနော့ စားပွဲပေါ်မှာ စာသင်နေ့ တိုင်း တာဝန်ကျ အသင်းကျောင်းသားတွေရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် 
ကွမ်းပန်းကန်လေး နေ့ တိုင်းတွေ့ လာရတယ်။ ဆရာတင်ဋ္ဌေး ကွမ်းစားပုံက ကျနော်နဲ့ မတူ။ သူက ဆေးရွက်
ကြီးများများနဲ့ ယာ၊ ပါးစပ်ထဲငုံထားတာ။ တစ်နေ့ မှာမှ ၄ ယာ၊ ၅ ယာ လောက်။ ကျနော်က သူ့ လိုမဟုတ်
တလုတ်ပြီး တလုတ် အဆက်မပြတ်၊ ဝါးလိုက် ထွေးလိုက် ရေသောက်လိုက် စာသင်လိုက်။
ရာသီက ဆောင်းအကုန် နွေ အဦး
နေပူကျဲကျဲတောက်၊ မြေပူပူမှာ အပင်လေးတွေက နွမ်းခြောက်ခြောက်ဖြစ်နေပြီ။ ချောင်းရေ၊ မြောင်းရေတွေလည်း ခန်းခြောက်ချင်နေပြီ။ တို့ အတူ တာဝန်ကျအသင်း ကျောင်းသားတွေလည်း တဖြည်းဖြည်း
ကွမ်းရွက်ရှာရခက်လာပြီ။ သူတို့ တစ်တွေ သူတို့ ဆရာအတွက် ကြိုးစားရှာကြပေမယ့်အရင်လိုများများ
စားစား မရနိုင်တော့ ။ နောက်ဆုံးတော့ဆရာထိုင် ပြူတင်းက လှမ်းမြင်နေရတဲ့ဘုန်းကျောင်း အနောက်မလွယ်တံခါးပေါက်နားက သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါ် မျက်စိရောက်သွားတယ်။ ဒီအပင်ပေါ်မှာ ကွမ်းရွက်ပင် နွယ်တက်နေတယ်။ ကွမ်းရွက်တွေက သိပ်များများစားစားမရှိလှ။ ဆရာတော်လေး စိုက်ထားတဲ့ အပင်။ ဘုန်းကျောင်းသားတွေ မနက်တစ်ကြိမ် ညနေတစ်ကြိမ် ဂရုတစိုက် ရေလောင်းပေးရတဲ့ အပင်။
ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီး လက်ညှိုးထိုးပြတော့ဘုန်းကျောင်းသားတွေ မျက်လုံးပြူးကုန်တယ်။
ဒါ ဆရာတော်ရဲ့ အပင်တဲ့ ။ သူတို့ ကြောက်နေကြပြီ။ ကြောက်မယ်ဆိုလည်း ကြောက်လောက်ရဲ့ ။ ဆရာတော်လေးက သက်တော်ငယ်သေးပေမယ့်ခပ်ထက်ထက်။ မြို့ မှာ စာသင်တိုက်တွေတက်ပြီး သူ့ ရွာလေးမှာ ကျောင်းပြန်လာထိုင်တာ။ စာအရမ်းဖတ်ပြီး နိုင်ငံရေး အကြောင်းများပြောရင် သူ့ မျက်လုံးတွေက အရောင်တလက်လက်။ နောက်ပြီး ဒီနယ်မြေက KNU တပ်တွေကလည်း တော်တော်လေး လေးစားကြည်ညိုကြတယ်။
ကျနော် အဲဒီကျောင်းသားကိုပြောလိုက်တယ်။ ဆရာတော်ဆီမှာလျှောက် ကျောင်းဆရာလေးစားချင်လို့တစ်ရွက် နှစ်ရွက်လောက်စွန့် ပါလို့ ။ တကယ်တော့ဒီဆရာတော်လေးနဲ့ကျနော် ဝမ်းကွဲတော်စပ်တာရယ်၊
နောက်ပြီး တနယ်လုံးက ဒီကျောင်းဆရာလေးပေါ် အလေးထားတာရယ်ကြောင့်ကျနော်တောင်းရင် သေချာပေါက် ရမယ်ဆိုတာသိတယ်။ ရလည်းရပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်ရွက်နှစ်ရွက်၊ တစ်နေ့တစ်ရွက်နှစ်ရွက်
နဲ့ဒီလိုနဲ့ကျောင်းကြီးမပိတ်ခင် ဆရာတော်လေးစိုက်ခဲ့ကွမ်းပင်ဟာ တောတွင်းပျော်ပါးစပ်ကြောင့်အရွက်တွေပြောင်ပြီး အပင်ဟာသေသွားခဲ့ တယ်။ နောက်ပိုင်း ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ရင်းနှီးလာတဲ့ အခါကြတော့သူ တို့ တွေက ကျနော့် ကို ကျောင်းဆရာလို့မခေါ်ကြတော့ ဘဲ ကွမ်းဆရာလို့ခေါ်လာကြတယ်။ သူတို့ တွေ ပစ္စည်းပစ္စယဝယ် မြို့ ပေါ်တက်ဈေးဝယ်တဲ့ အခါ ကျနော်တို့ကျောင်းဆရာ ၂ယောက်အတွက် သတိတရ ကွမ်းရွက်တွေဝယ်လာပေးတတ်ကြတယ်။
ရွာသူ တစ်ယောက် ရေတွင်းဘေး ရေချိုးတဲ့အခန်းကို
ဒီ့ထက် ရင်သိမ့်တုန်အောင် ရေးစေ့ချင်တယ်
ဖတ်ပြီး မျောသွားးး မောသွားပါတယ်လို့
အဲ့ဒါ လာပြောတာ. . .
အဲဒီ့အခန်းက ကျနော့ အတွက် သီးသန့် လေ။ ဒီမှာတော့အနံ့ လေးလောက်လာပေးတာ။
.အတွေ့အကြုံ လေးကိုအသေးစိတ်ပုံဖေါ်ပြတော့ မျက်စေ့ထဲ ရုပ်လုံးပါပေါ်လာတယ်ဗျ…
ကျေးဇူးပါဗျို့ …. ko Mike
-ပို့စ်က ဆက်ရေးမှာမို့ ဖြတ်လိုက်တာလား….မပြီးသေးဘဲ တက်လာတာလားငင်..
-ဖတ်နေရင်း ရုတ်တရက် ရပ်သွားလို့ ဆန့်တငံ့ငံ့ဖြစ်ကျန်ခဲ့တယ်..
ကွမ်းကို ဘယ်လိုကြောင့်နှစ်သက်ကြတယ် မသိဘူး
ကိုယ်တိုင်တော့ တခါတခါ ထွေးချခံရတဲ့ အချိန် အလွန်အော်ဂလီဆန်ပြီး ရွံ့တယ် မန်းလေးက လိုင်းကားမောင်းသမားတွေ စည်းကမ်းမရှိဘူး ပြတင်းပေါက်ကနေ ထွေးချင်သလိုထွေးချတာ
လူငယ်ဘဝမှာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ တွယ်တာပါပဲ။
ဒီလိုပါပဲ ကျနော် ကွမ်းကြိုက်တာက။
ကလေးတွေ အကြောင်း ကျနော်ဆက်ရေးနေတုန်းပါ အမ pooch.
ကိုယ်တိုင်လည်း ငယ်ငယ်က တောကျောင်းကလေးမှာ စာသင်လာရတော့ တောတွင်းပျော်ရေးတဲ့ ဇာတ်ထဲ စီးမျောသွားတယ်။
စာသင်ပေးရတာကို ၀ါသနာပါလို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဆရာမလုပ်ချင်တာ။
ဆရာမတောင် ကလေးတွေကို သင်ရတဲ့ မူလတန်းပြဆရာမ ဖြစ်ချင်တာ။
ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးထဲ စီးမျောလာတာမို့ ဆတ်တငံငံ ဖြစ်သွားတယ်။
လေထန်ကျောင်းကို ဇာတ်သိမ်းလိုက်ပြီး တာဝန်ကျေပါပြီနော်….
ကျနော်လည်း ကားသံ၊လူသံ ဆူညံနေတဲ့မြို့ ဘုံမှာ မပျော်တော့ တာမို့ 
ဆိတ်ငြိမ်ရာ အရပ် တောထွက်ပြီး ပိုက်ဆံရကြောင်း တရား
သွားကျင့် တော့ မယ့်အကြောင်း
.နယ်စပ်မှာ နွားခိုးဂိုဏ်းနဲ့ တွေ့ရာက ကျောင်းဆရာဖြစ်သွားတာ
.ထိဆို တော်တော်ကြာပြီ။အဲလောက် အကြာကြီးပစ်မထားနဲ့နော်။ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။
နွား မှောင်ခို ဂိုဏ်းကြီးကို မှတ်မိနေတုန်းပါလား…
ကျနော်လည်း တစ်နှစ်မှာမှ ဒီအချိန်လောက်ပဲ တောထဲကထွက်နိုင်တာ။
တခါတလေတော့အဝေးကနေ ရွာထဲကို လှမ်းလှမ်း မျှော်ကြည့် မိပါရဲ့ ။
ကျနော်လည်း တောကျောင်းလေးတွေနဲ့ ဝေးခဲ့ တာ တော်တော်ကြာသွားခဲ့ ပါပြီ။
အစချီတာရော ပြောစရာ မရှိတာမို့ ကွမ်းဆရာနောက် လိုက်လာပြီ ဖြစ်၏။
ကွမ်းဆရာနောက်လိုက်တော့ကွမ်းတော့ဝါးရလိမ့်မနော့ ။
​တော်​​သေးတာ​ပေါ့ဗျာ ​ကျော့်​ အူး​လေးဆရာ​ကျောင်း တုန်းက က​လေး​တွေ စာ​မေးပွဲ ​ဖြေတာ စာပွဲ ​ပေါ် ချက်​အရက်​ တစ်​လုံးစီ တင်​​ပေးကြသတဲ့ ။ ဆြာက အရက်​ကြိုက်​​တော့ စာ​မေးပွဲ​အောင်​ချင်​လို့ အရက်​ လက်​​ဆောင်​​ပေးကြသတဲ့ ။ ကြာပါပြီ ၁၉၈၀ ​လောက်​ က
ဆရာ ဆရာ ကွမ်းကြိုက်သတဲ့ဗျာ
တကယ်ဆို အမှန်က အရည်မရ အဖတ်မရ
ဝါးထွေးခေါ်သဗျ . . .
ရွာထဲ မတွေ့ ရတာကြာပြီနော် ဆရာထွန်း။